सरकार नै संसदको प्रभावकारिताको विपक्षमा ? - NepalTimes
सरकार नै संसदको प्रभावकारिताको विपक्षमा ?
१० चैत, काठमाडौँ । सरकारले संसदको प्रभावकारिता नचाहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिदैँ सांसदहरुले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर संसदको प्रभावकारीता नचाहेको बताएका हुन् । जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सदन चलाउने र फलदायी होस् भन्ने नचाहेको बताए ।
उनले भने ‘सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिदाँ अपर हाउस पनि चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभा । त्यसको पनि अधिवेशन बोलाउनु प¥यो । विधेयकहरु लिएर आउनुप¥यो । दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक । सरकारले नै संसद चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति छ । सरकारको दायित्व हो विधेयक ल्याउने ।’
नेकपा(एमाले)कि सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई विघटन गर्ने गलत दृष्टिकोण राख्नुभएकाले संसदको प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान नपु¥याउनुभएको बताइन ।
उनले भनिन ‘संसदलाई प्रभावकारी गराउने जिम्मा सांसदको होइन सरकारको हो । हामी त बैठकमा तोकिएको समयमा आएका छौँ । तर सरकारले विधेयकहरु नै ल्याउँदैन । बिजनेस नै दिदैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बसेर कार्यसूची निर्धारण गर्दैन भने त संसद एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन । प्रधानमन्त्रीको यो संसदलाई, जनताको प्रतिनिधिमुलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ । उहाँले अहिलेपनि एउटा गलत दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ र यसको प्रभावकारी सञ्चालनको कुरामा ध्यान दिनुभएको छैन ।’
नेकपा(एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयक आउन नसक्नुमा सरकारको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । सरकारले विजनेस पेश गर्दापनि अगाडी बढन नपाएकोे बताए ।
उनले भने ‘प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भएपनि हामी जुन कारणले यो अप्ठ्यारोमा प¥यौँ त्यो अप्ठ्यारोहरु फुकाउने काम भने सर्वोच्च अदालतले गरेन । त्यो अप्ठ्यारो के हो भन्दा जुन आधारमा सरकार उभिएको छ झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको अवस्था । अब त्यो अवस्था त रहेन । सत्तापक्ष माथिदेखि तलसम्मै दुई चिरा भयो । त्यसैले त्यो दुई तिहाइ बहुमत अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन कायम छ । तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ । त्यसैले यो स्थिति तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले बिजनेस पेश नगरेको हो र ? सरकारले दिएको बिजनेस त अगाडी बढ्नै पाएन । बढ्नै सकेन ।’
उपनेता नेम्वाङले संसदमा भएको समस्याको बारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुने बताए । समस्यालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिने बताए ।